बल्ल बुझे क्षिमेकीहरुले...
भारतको भाजपाका प्रभावशाली नेता डा.सुव्रमण्यम स्वामीले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन चीन र भारत सहमत भइसकेको खुलासा गरेका छन् । हालै काठामाडौं आएरै उनले यसो भनेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगसमेत भेटवार्ता गर्न भ्याएका स्वामीको भनाई अर्का भाजपाका नेताविजय जोलीको जस्तो सस्तो र सामान्य पटक्कै नहुने भनेर विचार राख्ने विद्वान धेरै छन् । कूटनीतिक र राजनीतिक दुबै विचारक पनि हुन् स्वामी । नेपाल नै आएर संविधान विपरितको अभिव्यक्ति दिनु र संवैधानिक भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नु कागतालीमात्रै हुनसक्दैन ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको संविधान नेपालीले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् नै, चीन र भारतविरोधी समेत रहेछ । नेपाल अभिभावकविहीन हुनपुगेपछि चीन र भारत विरुद्ध पश्चिमा ताकतहरुले सहज र सरल तरिकाले नेपाललाई खेल मैदान बनाइरहेका छन् । दुबै क्ष्ँिमेकीलाई हिन्दुराष्ट्र हुँदै संवैधानिक राजतन्त्रसम्म पुग्नुपर्छ र सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला ।
हुन पनि समयक्रममा समर्थन दिए पनि तिनीहरु आफ्ना हुँदैनन् । छेपारोले रङ बदलेजस्तो राजनीतिमा रङ बदलिएको देखिन्छ । स्वार्थमा नेताहरुले रङ बदलिरहन्छन् । मौसमअनुसारको ट्यूनिक लगाउन नेपाली राजनीति पोख्त छ । नेपालमा सच्चा साथी कसेको कोही छैनन्, सबै स्वार्थका पुतला हुन् । यस्ताको भर गर्न नसकेकै देखिन्छ छिमेकीहरुले । नेपालमा राष्«िय, पार्टिगतभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ माथि देखिन्छ । नेतापिच्छे स्वार्थ फरक फरक हुन्छ । राष्ट्रियनीति छैन, स्वार्थ छैन, जे छ नेताहरको स्वार्थ छ । यो अवस्थामा छिमेकीले कसरी आफ्नो स्वार्थरक्षा गर्न सक्छन् र ?
नेपालमा छिमेकी छन्, स्क्याण्डिनेभियन मुलुकहरु छन्, अमेरिकामात्र होइन, अरु पनि छन् के के के के । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हुनासाथ पर्लक्कै अन्त पल्टिन सक्ने नेता भएकै कारण छिमेकीहरु यस्ताबाट आश्वस्त हुन नसकेको पक्का हो । पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहेजस्तो देखिन्छ ।
हाम्रा नेताहरु भारतलाई सत्तोसराप गर्छन्, भित्रभित्र साखुल्ले पल्टन्छन् र स्वार्थ शिद्ध गर्छन् । अचम्म त के छ भने सत्ताधारी र प्रतिपक्षी नेपालका त हुनसकेनन्, कस्का हुन्, छुट्याउनै सकिन्न । आज एउटाको पक्षमा देखिएका भोलि अर्कैको पक्षमा उभिन पुग्छन् । यस्ता अविश्वसनीयबाट कसैको पनि हित हुनसक्दैन । आजित भएर होला भारत र चीन एउटा सहमतिमा पुगेका । नेपाली जनताले पनि यस्ता नेताबाट आश गर्ने के ? जो राष्टन्वादी भनेर मजैले भोट हाले, त्यही आज राष्ट्रघाती, जनघाती निस्कियो । पहिले पहिले आश्वासन पूरा हुने गर्थे, लोकतन्त्रका नेताहरु त भ्रम मात्र फैलाउँछन् ।
खासगरी चीन र भारतवीच पश्चिमा खेलिरहेका छन् । वीचमा छ नेपाल, रणनीतिक मैदान । नेपालको स्वाधीनता कमजोर हुनु भनेको चीन र भारत दुबैका लागि मृत्युघण्ट हो । यसकारण पनि चीन र भारत हिन्दुराष्ट्रको निकट पुगेका हुनसक्छन् ।
इसाइको निकट यिनै छन्, हिन्दुधर्म यिनै मानेको देखाउँछन् । सुरुङयुद्धको कुरा गर्छन् भारतको जयजयकार गर्ने र सीमा मिचिएको, नेपाल डुबेकोमा नबोल्ने पनि यिनै हुन् । भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ भनेर चाकरी पनि गर्छन्, खुला सीमा नियन्त्रण गर्न चासो नै देखाउँदैनन् । यिनैले नेपाललाई कमजोर पार्न इण्डो प्यासिफिक नीतिमा समेत हालेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय नीति नभएकै कारण र दलपिच्छेको आआफ्नो सोच नै राष्ट्रिय नीति हो कि भन्ने बिबादका कारणले पनि नेपालको समस्याहरु दिनदिनै बढेर गएको छ । नेपाल रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न नागरिकता विधेयकले पनि उठाइदिएको छ । सडक तातेको छ, सरकार चिसो छ । सरकार नेपालमा जन्मेका अथवा अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई समेत बंशजको नागरिकता दिएर सत्ता र शक्तिको स्रोत बनाउन लागिपरेको छ । नागरिकतामा यति फितलो नीति अपनाउने सरकार कुन खालको राष्ट्रिय सरकार होला ?
क्षिमेकी मुलुक दुबैको चासो नेपाल सुरक्षित भएमात्र क्षिमके पनि सुरक्षित हुनेछ । नेपालका नेताहरुको अविश्वसनीय हर्कतका कारणले उनीहरु सशंकित भएका हुन् र समयक्रममा क्षिमेकीहरुले बल्ल बुझ्न सकेका छन् कि नेपालमा विश्वसनीय आधार चाहिने रहेछ ।
त्यो आधार भनेको हिन्दुराष्ट्र र हिन्दुराष्ट्रको जगमा उभिएको संवैधानिक राजतन्त्र नै हो । राजतन्त्रभन्दा फरक अर्को उपाय नदेखेरै क्षिमेकीको चिन्ता देखिन्छ ।